Afyonkarahisar ခရီးသည်တင်သဲတင်ပြီးတူးဖော်သောထရပ်ကား Hit! | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[15 / 11 / 2019] TÜVASAŞရှိကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ထမ်းများ၏လစာနှုန်း	54 Sakarya
[15 / 11 / 2019] TEV UğuzTarıkDemirağအသက်မွေးမှုနှင့်နည်းပညာ Anatolian အထက်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး03 AfyonkarahisarAfyonkarahisar ခရီးသည်တင်သဲတင်ပြီးတူးဖော်သောထရပ်ကား Hit!
08 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 03 Afyonkarahisar, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
afyonkarahisarda ခရီးသည်ရထားသဲတင်မြေမြှုပ်ထားသော carpti ရထား
Afyonkarahisar ရှိခရီးသည်ရထားသဲတင်ပြီးတူးဖော်သောထရပ်ကားကိုနှိပ်ပါ။ ; Afyonkarahisar တွင် TCDD Taşımacılık A.Ş. ပိုင်ခရီးသည်တင်စနစ်သည်သဲသုတ်ထားသောမြေပေါ်သို့ရွေ့လျားနေသောထရပ်ကားတစ်စီးသည်အတားအဆီးမရှိစနစ်တကျဖြတ်ကျော်သည်။ 1 လူတွေဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
မတော်တဆမှုမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Afyonkarahisar Antalya အဝေးပြေးလမ်းမကြီး 25 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာ Damlalie နေရာဒေသ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 03 DY 803 ၏ပန်းကန်ဖြစ်သောK.Çပါသောတူးဖော်သည့်ထရပ်ကားသည်အဆင့်ဖြတ်ကူးဖြတ်ကျော်စဉ်ရထားကိုနှိပ်ပါ။ ထရပ်ကားမောင်းသူမတော်တဆရိုက်နှက်မှုသည်အနည်းငယ်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ 112 အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များမှယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှအနည်းငယ်ဒဏ်ရာရသောထရပ်ကားမောင်းသူကိုဆေးရုံသို့တင်ခဲ့သည်။
Çerkezköy Silivri ရိုးများထဲတွင်သဲ installed Wagon ဖြုတ်ချခဲ့သည်ကိုဖိ 13 / 04 / 2019 Çerkezköy-Silivri သည်ကုန်တင်ရထားလမ်းကြားတွင် ၀ င်ရိုးကိုဖောက်သည်။ ကျိုးနေသောတံတားကိုသတိပြုမိပြီးစက်ပြင်သည်ရထားကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးသဲတင်သည့်လှည်းတစ်စီးပြုတ်သွားသည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ၊ 12 Aprilပြီသောကြာနေ့မနက်တွင်နာရီကိုဆန့်ကျင်သည်။
Silivri ကုန်တင်ရထားဟာအမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကား 1 ဒဏ်ရာရသူသို့ဆော 07 / 10 / 2015 Silivri ကုန်တင်ရထားသည် 1 ဒဏ်ရာရသည့်အမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကားကိုထိမှန်ခဲ့သည်။ Silivri ကုန်တင်ရထားသည်မြူနီစီပယ်အမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကားကိုထိမှန်ခဲ့သည်။ အမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကားမောင်းသူသည်မတော်တဆမှုတွင်ဒဏ်ရာရခဲ့သည် Silivri Beyciler - Çayırdereကျေးရွာများအကြားကုန်ပစ္စည်းရထား…
အင်ဒိုနီးရှား LPG ခုနှစ်တွင်ရေနံတင်သင်္ဘောတင်ဆောင်ခရီးသည်ရထားသေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို) ရှိကြ၏2သို့ဆော 09 / 12 / 2013 အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ဆင်ခြေဖုံးရထားသည် LPG သယ်ဆောင်သည့်ရေနံတင်သင်္ဘောသို့ ဝင်၍2သေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင်ဆင်ခြေဖုံးရထားသည် LPG ဝန်တင်သောရေနံတင်သင်္ဘောသို့ဝင်လာပြီး2သည်သေသည်။ သေဆုံးသူ ဦး ရေတိုးလာလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်မှုများရှိနေသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏မြို့တော်ဂျကာတာရှိဆင်ခြေဖုံး…
အမေရိကန်ရထားဓါတ်ငွေ့ထရပ်ကားများပြား loaded ခဲ့သည် 25 / 03 / 2016 အမေရိကန်ကုန်ရထားမှဓာတ်ငွေ့တင်ဆောင်ထားသောထရပ်ကားထိမှန် - အမေရိကန်မင်နီဆိုတာပြည်နယ်အဆင့်ရှိလမ်းဆုံ၌ဓာတ်ငွေ့တင်ဆောင်ထားသောထရပ်ကားတစ်စင်းသည်ကုန်တင်ရထားတစ်စင်းထိကျသွားသောကြောင့်ရထားပေါ်မှလူနှစ် ဦး အနည်းငယ်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ကုန်တင်ရထားသည်ပရိုပိန်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသည့်အဆင့်တွင်တည်ရှိသည်။
TEV UğuzTarıkDemirağအသက်မွေးမှုနှင့်နည်းပညာ Anatolian အထက်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
Silivri ကုန်တင်ရထားဟာအမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကား 1 ဒဏ်ရာရသူသို့ဆော
အမေရိကန်ရထားဓါတ်ငွေ့ထရပ်ကားများပြား loaded ခဲ့သည်
ထို့နောက်မတိုင်မီ native လမ်းရထား Silkworm သဲအိတ်ခရီးသည်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (308) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)